Jumlada Samsung S21 Ultra UV xabagta Soosaaraha Muraayadda iyo Alaab-qeybiye | OTAO
Maxaad ugu baahan tahay muraayadda qaboojiyaha leh ee xabagta UV?
Moodooyinka ugu caansan ee Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, iyo VIVO dhammaantood waxay isticmaalaan shaashado qaloocsan oo leh leex weyn. Illaa iyo hadda, muraayad kasta oo kulul oo foorarinaysa qulqulka adduunka ayaa lahaan doonta mid ama in ka badan dhibaatooyinka soo socda:
Ku dabool qayb ka mid ah aagga bandhigga geesaha bidix iyo midig
Taabashadu ma ahan mid xasaasi ah
Lama adeegsan karo furka furaha shaqada ama furitaanka ma aha mid xasaasi ah
Boorka ayaa si qoto dheer u gala muraayadda
Waxaa jira goobooyin, geesaha cad, ama goobooyin ayaa soo muuqanaya dhowr maalmood gudahood kadib marka ay ku dhegaan
Macaamiisha caadiga ahi iskood iskama soo diri karaan
OTAO's UV muraayada muraayadaha dhaldhalaalka ah ayaa si fiican u xallisa dhibaatooyinkaas.
Waa maxay Muraayadda UV Muuska la dhalaaliyey?
Baakadaha muraayadda kulul ee UV ayaa la socda wax loo yaqaan 'LOCA gel'. LOCA waa qaab gaaban oo ah 'Liquid Optical Clear Adhesive'). Jel LOCA waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo muraayadaha indhaha, muraayadda iwm ee jirka taleefanka iyo maadaama ay tahay xabag cad, waxay leedahay sifooyin muuqaal ah oo sareeya. Markaad isticmaasho Ultraviolet light (UV) ilaa bogsiiyo dareere ah UV xabagta, sameeyayaashan qalabka sameeya waxay bilaabeen inay ugu yeeraan 'muraayadda UV'.
Dareeraha dareeraha cad ee indhaha (LOCA) waa tiknoolajiyad isku xirnaanta dareere ku saleysan oo loo adeegsado alwaaxyada taabashada iyo aaladaha soo bandhiga si loogu xiro muraayadaha daboolka, balaastigga, ama qalabyada kale ee indhaha qeybta weyn ee dareemayaasha ama midba midka kale. Kooladahani waxay hagaajiyaan astaamaha indhaha iyo cimri dhererka. Xabagta LOCA badanaa waa la qallajiyaa iyadoo la isticmaalayo iftiinka ultraviolet.
Sidee loo doortaa muraayad wanaagsan oo muraayad UV ah?
Muraayadaha muraayadaha dhajiska ah ee UV ayaa markii ugu horreysay soo muuqday 2018, laakiin illaa hadda, badeecooyinka badankood ee suuqa yaalla waxay leeyihiin dhibaatooyinka soo socda
Qalabka ayaa kala firidhsan oo rakibiddu waa dhib badan tahay. Marka qalad dhaco, galaas waa la xoqi karaa oo keliya (sawir);
Waqtiga daaweynta waa mid aad u dheer (2 daqiiqo);
Markii aad bogsato, way adagtahay in ilmada la jeexo. Tusaale ahaan, haddii muraayadaada si tartiib tartiib ah u jabtay oo ay u baahan tahay in lagu beddelo muraayad cusub oo qabow, waxaad dhaawici kartaa gacmahaaga (sawir);
Xabagta ayaa buux dhaafisay inta lagu gudajiray rakibida, kuna dhagsan badhamada dhinaceeda, taas oo ka dhalatay duug (sawirka)
OTAO's xabagta UV ee muraayadda qaboojiyaha ah
Farshaxanka muraayadda oo si gaar ah loogu talagalay muraayadda UV, si sahlan loo rakibo, qof walba si fudud ayuu u bilaabi karaa ka dib daawashada fiidiyowga hawlgalka. Marka alaabtayada waxaa lagu iibin karaa khadka tooska ah iyo qadka labadaba.
Iyadoo la adeegsanayo jiilka ugu dambeeya ee xabagta UV, waqtiga daaweynta ayaa lagu soo gaabin karaa 1 daqiiqo.
Xabagta ugu dambeysa ee UV ayaa si fudud loo kala goyn karaa xitaa dhowr bilood ka dib isticmaalka ka dib daaweynta ka dib, ma jiri doono wax haraaga ah, waligoodna gacmahaaga kuma dhaawici doonaan.
Isku dheellitir suufka iyo naqshadeynta naqshadda cudbiga si loo hubiyo in xabagta aysan buuxin doonin inta lagu jiro hawsha muraayadda
Samsung Xusuusin 20 Ultra
Hore: Samsung S21 Ultra 3D Hot-qalooca TPU Screen Protector
Xiga: IPhone 12 taxanaha 2X ilaaliyaha shaashadda muraayadda leh ee burbura